Jamaica “Waxay Ka Dhigtaa Inay Dhaqaajiso” oo leh Hal -abuurnimo Cusub Bandhigga Adduunka 2020
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Jamaica “Waxay ka dhigtaa inay dhaqaaqdo” oo leh hal -abuurnimo cusub Bandhigga Adduunka 2020
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta
Jamaica “Waxay ka dhigtaa inay dhaqaaqdo” oo leh hal -abuurnimo cusub Bandhigga Adduunka 2020
Jamaica ee Bandhigga Adduunka
Dalxiiska Jamaica ayaa lagu wadaa inuu ku soo bandhigo badeecadiisa iyo hal -abuurnimadiisa cusub Bandhigga Caalamiga ah ee 2020 Dubai ee Imaaraadka Carabta (UAE). Mawduuca Jamaica Pavilion ee Bandhigga Adduunka 2020 waa: “Jamaica ayaa Dhaqaajisa,” taasoo la micno ah in haddii ay tahay muusigga ama cuntada ama isboortiga, Jamaica ay dhaqaaqdo oo isku xirto adduunka.
Ka -qaybgalayaasha Bandhigga Adduunka waxay dhadhamin doonaan Jamaica hoygooda qabow.
Barxadda taambuuggu waxay ka tarjumaysaa dhaqanka Jamaica iyo dadaalka loogu jiro in la beddelo oo lagu soo bandhigo jasiiradda sidii xarun saadka oo isku xirta Ameerika iyo adduunka intiisa kale.
Guriga taambuugga oo leh 7 aag, booqdayaashu waxay awoodi doonaan inay la kulmaan indhaha, dhawaaqyada, iyo dhadhanka Jamaica.
Xarunta Jamaica Pavilion ayaa durba loo magacaabay mid ka mid ah “kuwa ugu qabow” World Expo 2020 Dubai.
“Waxaa muhiim ahayd in Jamaica lagu matalo bandhigan caalamiga ah si loo soo bandhigo mar kale dhaqanka hodanka ah ee jasiiradda iyo kheyraadka dabiiciga ah ee quruxda badan. Ka -qaybgalayaasha Bandhigga Adduunka waxay heli doonaan dhadhanka meesha loo socdo waxayna fahmi doonaan sababta aan u nahay 'Garaaca Wadnaha Adduunka,' 'ayuu yiri Donovan White, Agaasimaha Dalxiiska Jamaica.
Donovan White, Agaasimaha Dalxiiska Jamaica
Gaarka ah ee taambuuggu wuxuu ka tarjumayaa dhaqanka Jamaica iyo hindisaha lagu beddelayo laguna soo bandhigayo jasiiradda sidii xarun saadka oo isku xirta Ameerika iyo adduunka intiisa kale. Guriga taambuuggu wuxuu leeyahay 7 aag, taas oo u oggolaanaysa booqdayaasha inay la kulmaan indhaha, dhawaaqyada, iyo dhadhanka Jamaica; sida Jamaica dunida u dhaqaajiso; waxayna u adeegaan sidii xiriir saadka.
Pavilion -ku wuxuu leeyahay istuudiyaha muusigga tooska ah kaas oo iftiiminaya qaar ka mid ah fannaaniintii Jamaican ee ugu caansanaa, fannaaniinta iyo soo -saarayaasha; halkaas oo dadku ku dhegeysan karaan muusikada Jamaican, ay ku abuuri karaan liisaskooda u gaarka ah, oo ay ku soo jiidan karaan jasiiradda firfircoon iyada oo ka dhadhaminaysa suxuunta runta ah iyo kuwa dhaqameed ee qaar ka mid ah Kuugga Jamaican ee ugu sarreeya iyaga oo adeegsanaya isku -darka gaarka ah ee geedo iyo dhir udgoon. Tilmaam kale oo gaar ah ayaa ah App Navigation si loo helo socdaalka dalwaddii iyo sahaminta Jamaica oo ah goob dalxiis.
Bandhigga Dubai oo hore loo qorsheeyay inuu dhaco sannadkii hore ayaa hadda dhici doona Oktoobar 1, 2021, wuxuuna socon doonaa illaa Maarso 31, 2022. Munaasabadda ayaa dib loo dhigay sababtoo ah dillaaca COVID-19 adduunka oo dhan. Bandhigga 2020 waa kii ugu horreeyay ee lagu qabto Bariga Dhexe, Afrika, iyo Koonfurta Aasiya wuxuuna ku wajahan yahay fududeynta wada -hadal caalami ah, oo nolosha u horseeda mawduuca ugu weyn ee "Isku -xirka maskaxda, abuurista mustaqbalka." Bandhigga Adduunka waxaa la filayaa inuu soo jiito 25 milyan oo booqasho ah muddada 6-da bilood ah.